Dhabar-jebinta uu Uhuru "doonayo" in uu afka ciidda ugu daro Soomaaliya
By WARIYAHA NAIROBI , GAROWE ONLINE
Warbaahinta Kenya ayaa qarxisay xeelad diblumaasiyadeed oo Kenyatta damacsan yahay in uu Soomaaliya ku lagdo dacwada badda.
NAIROBI, Kenya – Warbaahinta maxaliga ah ayaa ku warameysa in madaxweynaha Kenya uu si rasmi ah u daah-furay dhabar-jedin diblumaasiyadeed oo ka dhan ah dalka Soomaaliya.
Qorshahaasi oo u muuqda "midkii ugu dambeeyay" ee dedaaladda Kenya ay ku raadineyso in wada hadal lagu dhameeyo dacwadda badda ayaa qayb ahaan kusoo dhamaaday weji gabax.
Balse talaabada uu Uhuru Kenyatta haatan bilaabay oo ku baahsan Afrika, Yurub iyo Bariga Dhexe ayaa wuxuu ku suntan yahay marka uu soo baxo go’aanka Maxkamada Cadaalada Aduunka.
Xeer-beegtada ICJ oo dib u bilaabeysa dhageysiga gal-dacwadeedkan 19-ka bisha September ee sanadkan 2019 ayaa kadib soo saari doontaa xukunka ugu dambeeyay ee kiiskan ku aadan.
Soomaaliya oo dacwadda gudbisay 2014-kii ayaa ku eedeysay Kenya sheegasho been ah oo ku aadan goob ku taala Badda Cas gaar ahaan xuduudka badeed oo dhan 100 KM oo isku wareeg ah.
Goobtaasi ayaa waxaa la sheegayaa in ay hoddan ku tahay noocyo kamid ah kheyraadka dabiiciga ah sida Shidaalka iyo Gaaska naqaska ah.
Sidda uu qoray The East African, istaraatiijiyadda cusub ee uu maleegayo Kenyatta ayaa ah "cod Afrikaanimo" isaga oo waydiisanaya Midowga Afirka iyo Qaramada Midoobay in ay farogeliyaan xukunka.
Wargeyska ayaa intaasi ku daraya in qaar kamid ah lataliyeyaasha Madaxtooyadda Kenya ay soo jeediyeen in gabi ahaanba ay ka baxaan kiiska, balse waa cod aanan wali go’aan laga qaadan.
Talooyin kale oo xukuumadda Kenyatta loosoo jeediyay ayaa jira, sidda uu xusay joornaalka oo aanan soo bandhigin fahfaahinta.
Fekerka cusub ee uu hindisay Kenyatta ayaa ka dambeeyay, sidda uu tibaaxay jaraa'idka, markii uu ku guuldareystay in uu xulufo ama taageero uu ka helo wadamada Carabta iyo Shiinaha.
Ururka Jamaacada Carabta oo dhowaan la saftay Soomaaliya ayaa uga digey Kenya in ay farogeliso biyaha iyo madax banaanida dalka leh xeebta ugu dheer qaarada Afrika. Shiinaha wuu ka gaabsanayaa.
Balse, sidda ay qortay majaladda, Uhuru waa mid aanan wali rajo dhigin, isaga oo todobaadyadda soo aadan safaro ku tegi doono dalal uu ka raadinayo xulufo uu kula xifaaltamo Soomaaliya.
Illo wareedyo diblumaasiyadeed ayaa sheegaya in Kenya ay caawimaada ka baadigoobeyso Midowga Yurub, Mareykanka iyo xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay sida, France, China, Russia iyo UK.
Si lamid ah Kenya ayaa u tartameysa jagooyin sar-sare oo ay ka qabato ururo goboleed iyo in ay xubin ka noqoto Golaha aan joogtada ahayn ee UN-ka. Balse, hadii ay ku guuleystay waxba kama bedelayo xukunka.
Markii aysan wax natiijo ah kasoo bixin wada xaajoodyo socday lix sano, Kenya ayaa haatan isku dayeysa in ay sameyso "maquunin diblumaasiyadeed" maadaama guusha "looga cad-cad yahay".
Talaabadii ugu dambeysay ayaa ahayd in Uhuru Kenyatta uu waydiistay ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, in uu u kala dab-qaado Soomaaliya iyo Kenya, balse dalabkaasi wuu dhicisoobay.
Sikastaba ha ahaatee, hadii kiiskan loo xukmiyo dhanka Soomaaliya oo wada xaajood diiday, Kenya ayaa noqon doonta dal aanan lahayn wax bad, garab istaagna uga baahnaan doonta dalalka deriska ah.
Kenya oo "ogolaatay" in kiiska badda ay xukmiso maxkamadda ICJ
Soomaliya 25.09.2019. 07:08
Hogaamiyeyaasha saddexda dal oo ku kulmay Mareykanka ayaa isla soo qaadey kiiska badda iyo xiisada ka dhalatay.
Cawad oo beeniyey in Abiy uu u kala dab qaadayo Soomaaliya iyo Kenya
Soomaliya 11.07.2019. 07:54
Farmaajo oo Kenya kaga qeyb galaya Shirka Dhaqaalaha Badaha [Sawirro]
War Saxaafaded 25.11.2018. 23:40
Madmadowga ku xeeran safarka la filayo in uu Farmaajo ku tago Kenya
Soomaliya 09.03.2020. 06:50
Madaxweyne Farmaajo oo u ambabaxay dalka Kenya
Soomaliya 27.11.2017. 13:49
Mas'uuliyiinta loo diiday inay galaan Kenya oo ku laabtey Muqdisho
Soomaliya 21.05.2019. 10:40
Jubaland oo shaacisay mowqifkeeda wadahadalkii Farmaajo iyo Uhuru
Soomaliya 05.03.2020. 18:55
Kenya oo 3 shardi ku xirtay xalinta khilaafka kala dhaxeeya Soomaaliya
Afrika 18.02.2019. 13:06
Daacish oo qiratay sarkaal ajnabi ah oo looga dilay gudaha Puntland 04.08.2020. 11:00